बैंकिङ पथमा प्रतिमाको खुसी |
बैंकिङ पथमा प्रतिमाको खुसी
प्रकाशित मिति :2016-05-30 16:46:54
कास्की। स्कुले बालबालिकालाई सोधौं, भविष्यमा के बन्ने? डाक्टर, इन्जिनियर पाइलट। पहिलो पंक्तिमा यिनै उत्तर आउँछन्, त्यसपछि मात्र सरकारी जागिर, शिक्षक, बैंकरलगायत अरु अरु। प्रतिमा पोखरेललाई पनि स्कुले जीवनमा कसैले भविष्यको योजना सोधेभने यस्तै रेडिमेट उत्तर दिन्थिन्, डाक्टर बन्ने।
‘कलिलो दिमागमै के बन्ने भन्ने कुरा अभिभावक र समाजले तय गरिदिन्छन्, समाजमा प्रतिष्ठित र ठूलो मान्छे बन्नु भनेको डाक्टर, इन्जिनियर, पाइलट बन्नु हो भन्ने बाल मनोविज्ञानमा पर्छ,’ प्रतिमा भन्छिन्,’ती बाहेकका पनि सम्मानजनक र ठूला पेसा हुन् भन्ने अभिभावकले बुझ्न र बाबुनानीलाई बुझाउन जरुरी छ।’
अध्यात्म भन्छ, ‘यो संसार बुझ्नु छ भने पहिले आफूलाई बुझ। आफूलाई चिन्नु भनेको भगवानलाई चिन्नु हो।’ यदि आफूलाई चिन्न सकिँदैन भने संसारमा अरु केही पनि चिन्न सकिँदैन। प्रतिमाले पनि आफैंलाई चिनिन् र अहिले बैंकर बनिन्। प्रतिमाको मन बैंकर हुँदा जति रमाएको छ त्यति नरमाउन पनि सक्थ्यो मन नलागी नलागी डाक्टर भएको भए। उनी आफूले इच्छा गरेको पेसा रोजेर अगाडि बढिरहँदाखुसी र सुखी छन्। भनिन्छ ‘आफूलाई मन परेको कामलाई पेसा बनाइयो भने खुलेरै चल्छ जिन्दगी।’
स्कुल पढ्दा नै सुकिला पोशाकमा बैंक जाने आउने कर्मचारी देखेरै प्रतिमालाई लोभ लाग्न थालिसकेको थियो । उनको प्रण थियो बैंकमै काम गर्छु। सबैले गर्ने सम्मानले उनको मन तान्थ्यो। हाम्रै वरिपरि थुप्रै सम्मानित काम छन्, तर हामी किन देख्न सक्दैनौं, उनी सोच्थिन्।
‘मल्टिमोडल उच्च माध्यामिक विद्ययालबाट प्लस टु सकियो। सानैदेखि भन्ने गरेको डाक्टर, नर्स पढ्ने कि आफूलाई मन परेको क्षेत्रका लागि पढ्ने? आफैंभित्र दुईवटा बाटा जेलिए। अन्यौलकै बीच नर्स पढ्न प्रवेश परीक्षा दिएँ’ उनले भनिन्। नाम पनि निस्क्यो, तर उनले नर्स बन्ने बाटो मोडिन् र लागिन् म्यानेजमेन्टतर्फ। उनलाई बैंकमै काम गर्ने इच्छाले जित्यो।
‘मैले नर्स वा डाक्टर नै बन्छु भनेर लागेको भए, सायद सफल हुने थिइनँ अथवा रमाउन सक्ने थिइन्ँ,’ प्रतिमा भन्छिन्,]जे विषयमा आफू खुसी हुन र रमाउन सकिन्छ, त्यही विषय र काम गर्नुपर्छ।’
जनप्रिय क्याम्पसमा विविएस पढ्दै गर्दा माछापुच्छ्रे बैंकमा ‘प्रोजेक्ट वक’ गर्नुपर्‍यो। त्यहाँ प्रतिमाले बैंकिङ क्षेत्रलाई नजिकबाट बुझ्ने मौका पाइन्। उनलाई लाग्यो,’सन्तुष्ट हुन पैसा मात्रै सबैथोक होइन, आफूले चाहेको पेसामा रमाउनु र त्यसले दिने प्रतिफलले जीवन सुन्दर बनाउनु पनि हो।’ प्रोजेक्ट वर्कबाट प्रतिमा बैंकिङ क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण र काम गर्ने इच्छा पूरा गर्न दृढ बनिन्।
एकदिन स्थानीय पत्रिकामा प्रकाशित विज्ञापनमा उनको आँखा पुग्यो। सिटी डेभलपमेन्ट बैंकमा कर्मचारी आवश्यकता थियो। उनले निवेदन दिइन्। अन्तर्वाता भयो। नाम निस्क्यो। अन्ततः बैंकर बन्ने मनको इच्छा पूरा गर्दै क्यास अपरेसनमा काम थालिन्। आज प्रतिमाको बैंकिङ यात्रा ९ वर्ष पुगिसक्यो।
उनले काम थालेको सिटी डेभलपमेन्ट बैंक र ओम फाइनान्स मिलेर अहिले ओम डेपलभमेन्ट बैंक बनेको छ। यो अवधिमा बैंकिङ क्षेत्रमा उनले आफूलाई निखार्दै र तिखार्दै लगेकी छन्, प्रतिमाले। अपरेसन सुपरभाइजर, अपरेसन हेड र मानव संशाधन विभाग (एचआर) मा पनि संलग्न रहँदै आएकी प्रतिमा अहिले एचआर प्रमुख छिन्। उनले एचआर विभागमार्फत् अहिले २ सय २९ कर्मचारीलाई हेर्नुपर्छ।
सिटी बैंकमा काम गर्दा एक दिन प्रतिमाको भेट भयो, गोविन्द आचार्यसँग। गोविन्द र प्रतिमाको भेट चिनजानमा मात्रै सिमित रहेन, सम्बन्ध नजिकिँदै गयो। गोविन्दको रोजाई पनि बैंकिङ क्षेत्र नै थियो। गोविन्द काम गर्ने बैंकको खोजीमा थिए, प्रतिमा काम गर्दै थिइन्। दुवैको क्षेत्र एउटै। धेरै विषयमा विचार पनि मिल्ने। कार्यशैली पनि मन पर्यो। समयसँगै दुवैले निर्णय गरिसकेका थिए, यही नै हो मेरो जीवन साथी।
सेवाग्राहीका रुपमा भेट भएका गोविन्दसँग प्रतिमासँग बिहे भयो। बिहे हुँदा गोविन्द पनि बैंकर बनिसकेका थिए। अहिले गोविन्द ओम डेपलभमेन्ट बैंक लामाचौर शाखाका म्यानेजर छन्, पदीय हिसाबले गोविन्दको समेत रेखदेखको जिम्मेवारी प्रतिमाको छ। सानो छोरा र घरको व्यवस्थान दुवै मिलेर गर्छन्।
उद्योगपति विनोद चौधरीको भनाइअनुसार अनुशासनमा दुइटा कुरा पर्छन्, व्यक्तिगत चालढाल र समय व्यवस्थापन। प्रतिमा दुवै कुरामा सचेत छिन्। प्रतिमा र गोविन्द दुवै मिलेर घर व्यवस्थापनदेखि कार्यालय व्यवस्थापन गर्छन्। ‘धेरै महिलाको गुनासो हुन्छ, चुलौचौको मै सिमित हुनुपर्‍यो। मनको इच्छा मारेर घरमै खुम्चनुपर्छ,’ प्रतिमा भन्छिन्, ‘व्यवस्थापन गर्ने आफूले हो, इच्छाशक्ति हुनुपर्‍यो, समस्या समाधानको उपाय निस्कन्छ।’ गोविन्दले घरको काममा सघाउँछन्, दुबैको तयारी हुन्छ, ९ बजे बैंक पुग्नु।
उनको विचारमा भविष्य परिपक्व बनाउनु भनेको सम्पति मात्र आर्जन र धनी बन्नुमा मात्र सिमित हुनु होइन। ज्ञान आर्जनले जीवन सुन्दर बनाउनु पनि हो। ज्ञानलाई जीवनमा कसरी लगाउने त? ‘ज्ञानले नै हो सपना पूरा गर्ने बाटो देखाउने, सपना देख्नु भनेको भविष्य निर्माणको योजना बनाउनु हो,’ प्रतिमा भन्छिन् ।
प्राप्त ज्ञानलाई व्यवहार र योजना परिपूरकका रुपमा लिन सकिएन भने सफल जीवन जिउन गाह्रो हुन्छ। धन सम्पतिबाट होस् या ता मान प्रतिष्ठाबाट कुनै पनि क्षेत्रबाट सक्षम हुन सकिँदैन भन्ने मान्यता प्रतिमाको छ। जीवन सफल बनाउन दुवै कुरा चाहिन्छ।
आफ्नो भविष्य ठेगान लगाउनु र गन्तव्य निर्धारण गर्नु भनेको वर्तमानलाई नियाल्नु हो। प्रतिमाले बुझेकी छन्, वर्तमानलाई सवल र सक्षम बनाउन सकियो भने भविष्यमा आइपर्ने सानातिना समस्या र चूनौतिले कुनै पनि असर पुर्‍याउन सक्दैन्। त्यसो भए प्रतिमाको भविष्यको योजना के हो त? ‘अहिलेसम्मको ज्ञान र उपलब्धिलाई अरु खुडि्कलो बनाउँदै उक्लनु।’ भनाइ नै छ, सफलताले सफलता पछ्याउँछ।’
एकचोटी कुनै काममा सफल भइयो भने अरु पनि सफलता पछ्याउदै आउँछ। सफल उद्योगपति विनोद चौधरी भन्छन्, ‘प्रगतिमा सबभन्दा ठूलो बाधक भनेकै जे हाँसिल भयो त्यसैमा चित्त बुझाएर बस्नु हो। म यसको विरोधी हुँ।’ यस्तै एचआर प्रमुख मात्रैमा रमाउनु प्रतिमाको योजना होइन, उनको योजना त बैंककै सिइयो बन्नु हो। बैंकिङ क्षेत्रमा आफूलाई कुशल र समक्ष महिलाका रुपमा चिनाउनु हो’ उनले भनिन्।
आफूले छानेको पेसाप्रति सम्मान गर्न नसके आफू माथि जान नसक्ने प्रतिमा बनाउँछिन्। ‘पेसालाई सम्मान गरे पेसाले आफूलाई मान, प्रतिष्ठा, सम्पत्ति सबै दिन्छ,’ प्रतिमा भन्छिन्, ‘मलाई बैंकले नै पेसागत इज्जत दिएको छ, सन्तुष्टि दिएको छ।’ बैंकमा आउने सेवाग्राही, सहकर्मी, आफूभन्दा माथिका कर्मचारी सबैसँग समधुर सम्बन्ध कायम गर्न सके ज्ञान र सीपलाई बढाउँदै खुडि्कलाहरू पार गर्न सकिने उनको बुझाइ छ।
आफ्नो पेसामा नाम र प्रतिष्ठा कमाएको व्यक्ति आफू पनि खुसी हुन्छ, संस्थालाई पनि खुसी बनाउँछ र परिवारलाई पनि खुसी राख्न सक्छ भन्ने कुरा प्रतिमाले बुझेकी छन्। अहिलेको समय हरेक क्षेत्रमा महिला तथा पुरुषको समान सहभागिताको हो। आज महिला हरेक क्षेत्रमा उल्लेख्य उपस्थिति दर्शाउँदै छन्।
पेसा होस् वा व्यापार हरेक क्षेत्रमा महिलाको उल्लेखनीय उपस्थिति छ। बिस्तारै महिलाहरूले आफ्नो काम गर्ने दायरा पनि फराकिलो बनाइरहेका छन्। उनीहरू विभिन्न व्यवसाय गर्न अग्रसर देखिन्छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको महिलाको उपस्थितिले प्रतिमालाई खुसी लागेको छ।
‘महिलालाई आफ्नो पेसा, व्यवसायमा चुनौति छ,’ प्रतिमा भन्छिन्, ‘सबैभन्दा ठूलो चुनौति भनेको आर्थिक स्वतन्त्रता हो। त्यसको वातावरण महिला आफैं बनाउने हो।’ महिला आरक्षणमा होइन्, प्रतिस्पर्धा नै गरेर आउन सक्छन् भन्ने आत्मविश्वासको खाँचो रहेको उनको बुझाइ छ। ‘महिला दयाका पात्र हुनुहुँदैन, क्षमताले खोजीको पात्र बन्नुपर्छ,’ प्रतिमाको जोड छ।
अन्य क्षेत्रमा जस्तै बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा पनि समस्या छन्। नेपाली वित्तीय क्षेत्रको ठूलो कमजोरी सक्षम जनशक्तिको अभाव हो। ‘दक्ष जनशक्तिको अभाव हरेक क्षेत्रमा जस्तै बैंकिङ क्षेत्रमा पनि देखेकी छु,’ प्रतिमा भन्छिन्, ‘आफू दक्ष हुन सके हरेक क्षेत्रमा ठाउँ छ, दक्ष जनशक्तिले मात्रै संस्थालाई स्वच्छ बनाउन सक्छ।’
व्यक्तिसँग भएको भित्री शक्तिलाई जगाउन सक्यो भने जीवनलाई उज्यालो बाटोमा हिँडाउन सकिन्छ। आफूले चाहेको बाटोमा जीवनलाई डोर्‍याउँदा आफूलाई सजिलो अनुभव हुनुपर्छ, कुनै पश्चात्ताप र हिनताबोध हुनुहुँदैन भन्ने कुरालाई प्रतिमा स्थापित गर्न चाहन्छिन् । ‘सकारात्मक सोच र कर्मले जीवन अर्थपूर्ण बन्छ। अर्थपूर्ण बाँचिएको जीवनले सुख र सन्तुष्टी प्रदान गर्छ भन्ने कुरा बुझ्न जरुरी छ’ उनले भनिन्।
आज धेरै मानिस आफ्नो लागि नभई अरुका लागि बाँचिरहेका छन्। जीवन वास्तवमा आफ्नो लागि हो, अरुका लागि होइन। कर्म आफ्नो सुखका लागि गर्ने हो अर्काका लागि होइन। हामीले धेरै कार्य इच्छा नहुँदा नहुँदै पनि जवरजस्ती अरुका डरले वा करकापले गरिरहेका छौं। भित्री मनले इच्छा अनुसारको काम रोज्यो भने जीवन सुन्दर बन्छ भन्ने कुरा प्रतिमाले बुझिन् र यसैमा सन्तुष्ट छन्।